UNGABONGEZA NJANI ABAHLOBO KWI-ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS-IRADIO TIMES - IMIDLALO
Ungabongeza njani abahlobo kwi-Animal Crossing New Horizons
Kuninzi okunokwenziwa wedwa ekuLweleni kwezilwanyana iiHorizon ezintsha ukuze ube awukwazanga ukufikelela ekuqwalaseleni ukongeza izihlobo kumdlalo-the Uhlaziyo olutsha lukaMario kunye nokukhangela bamboo omncinci wasentwasahlobo zizinto nje ezimbini ezisigcina sixakekile.
Kodwa umdlalo uyakuvumela ukuba wongeze abahlobo kwaye ubazise kwisiqithi sakho ukuze ubonise yonke inkqubela esele uyenzile, okanye ubatyelele ukuze bazive benomona ngento abayenzileyo kunye nabo.
Malunga nendlela yokwenza, qiniseka ukuba ubhalisile kwiNintendo kwi-Intanethi kuqala, emva koko ulandele esi sikhokelo sisebenzisekayo!
Thenga ukuwela izilwanyana: IiHorizons ezintsha kwiGAME
Ungabongeza njani abahlobo ekunqamlezweni izilwanyana
Yenza indlela yakho kwisikhululo seenqwelomoya
Isikhululo senqwelomoya iDodo Airlines sisibuko sakho sokunxibelelana nabahlobo bakho ngelixa ukwisiqithi sakho. Nje ukuba ulapho, intloko uye kwi-Orville endala edesikeni kwaye uya kukunika ezinye iindlela. Enye yazo 'Ndifuna iindwendwe' ke qiniseka ukuba uyayikhetha xa ufumana ithuba.
Nje ukuba ukhethe oko, uya kufumana ukhetho lokukhetha umdlalo wasekhaya okanye okwi-Intanethi. Khetha kwi-Intanethi njengasekhaya ekuvumela kuphela ukuba udlale nomnye umntu kwikhonsoli enye. Nje ukuba yenziwe, uya kukhetha ukuba ngubani ofuna ukuthumela isimemo kuye.
Khetha abahlobo oza kubamema
Ke, ukuba sele unabahlobo nomdlalo kuluhlu lwabahlobo bakho beNintendo Shintsha, inkqubo ilula ngokwenene. Khetha nje Bonke abahlobo bam 'kwaye oko kuya kuthumela isimemo kubo bonke.
Ukuba azikho kuluhlu lwabahlobo bakho, kuya kufuneka usebenzise ikhowudi yeDodo. Ngoku khumbula, nabani na ofumana ikhowudi unokuza kwisiqithi sakho kwaye ngelixa bengenako ukuhambahamba betshabalalisa izinto, nangona oko kunokuba luhlaziyo olunomdla lwabadlali abaninzi oluya kutshintsha ngokupheleleyo umdlalo, kufanelekile ukukhumbula ukuba kungcono ungakwenzi thumela iikhowudi ngokungakhethiyo kuye nakubani na odibana naye.
Bonke abahlobo bakho kufuneka bayenze kukuya kwisikhululo seenqwelomoya kwisiqithi sabo, bathi bafuna ukutyelela idolophu ekwi-Intanethi kwaye baya kuba nawe kwakamsinya.
Indlela yokwenza umntu abe ngumhlobo osenyongweni kuLuhambo lwezilwanyana
Oku kubalulekile. Xa sithe abantu abaza kwisiqithi sakho abanakuhamba-hamba baphazamise izinto, banako ukuba ngabahlobo abasenyongweni- ke kububulumko ukuqinisekisa ukuba uyamthemba lo mntu phambi kokuba ubenze ibestie.
Kodwa ukuba uqinisekile ukuba umntu unokuthenjwa, kuya kufuneka ubangeze njengeNintendo Shintsha umhlobo kuqala kwaye ukuba oko kwenziwe, xa nobabini ukwisiqithi esinye, esakho okanye esabo, vula ifowuni yakho yeNook ukhangele usetyenziso olubizwa ngokuba luLuhlu lwaBafundi oluLungileyo. Mane umfumane umhlobo, khetha isimemo sokuba ube ngumhlobo osenyongweni kwaye yiyo loo nto, ibesties zobomi.
Ngoku uya kuba nakho ukubaphatha nanini na xa bekwi-intanethi kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa u-Orville unokuthumela isimemo sobunzima kuzo zonke ii-BFF zakho ngaxeshanye!
Jonga eyethu Ishedyuli yokukhululwa komdlalo wevidiyo yayo yonke imidlalo ezayo kwii-consoles. Tyelela iindawo zethu ukuze ufumane okungakumbi yokudlala kwaye iteknoloji iindaba.
Ukhangela into oza kuyibukela? Jonga eyethu Isikhokelo seTV .
ipesika roses ithetha
i-pixie yolondolozo oluphantsi olusikiweyo lobuso obungqukuva
uthetha ukuthini u-1 11
indlela yokwahlula inyibiba enoxolo
star iimfazwe series ukuze
ngowuphi umyalelo wokubukela iifilimu ezimangalisayo